भलिबल कर्मी यता पनि सोच्ने की « KhelkudNews.com
Published On :5September, 2020 4:11 pm
राष्ट्रिय खेल भलिबलको अधिवेशनको समय तोकिएको छैन । परन्तु हालकी उपाध्यक्ष निरोज मास्केले अध्यक्षमा पदमा दावादारी प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनको उम्मेदवारीसँगै अन्य उम्मेदवार को हुन सक्छ भन्ने पनि चर्चा चलेको छ ।
हालका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा ,महासचिव जितेन्द्र चन्द उपाध्यक्ष यम बहादुर गुरुङ तथा उपाध्यक्ष रञ्जन खड्का लगायत धेरै नाम छन् । तर, नेपाली भलिबललाई नजिकबाट नियाल्ने एक व्यक्ति भन्छन्, “ यो प्रवृत्तिगत लडाइँ हो । इमानदार र प्रस्ट सोच राख्नेहरूको प्रतिनिधित्व निरजले गर्ने छिन् । नेपाली समाजमा चली आएको शक्तिको हिसाब किताबमा केन्द्रित रहेर निहित स्वार्थ राख्नेको प्रतिनिधित्व कसैको हुन सक्छ , ” उनले अगाडी भने, “यसैको आधारमा कित्ताकाट हुने छ ”। अन्य यावत विषयमा बहस हुन सक्छ । तर, के कुरा बहस नगरी स्विकार्न सकिन्छ भने निरोज मास्के प्रस्ट र लोभ लालचरहित व्यक्ति हुन् ।
त्यसो त नेपाली भलिबलमा थुप्रै समस्या नभएको होइन । बाहिर जति ताम झाम छ , सङ्घ भित्र त्यसतै मनमुटाब । यस बिचमा मास्के नै अध्यक्षका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हो या होइन भन्ने लामो बहस हुन सक्छ । तर, एउटै तथ्य के हो भने अव भलिबल सङ्घको निर्वाचन हुन धेरै लामो समय लाग्ने छ । कोभिडको महामारीका कारण केही समय पछि नै सङ्घको निर्वाचन सम्भव देखिन्छ ।
यस बिचमा थुप्रै विषय बहसका लागि आवश्यक छन् र आगामी अधिवेशन यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण हुने छ । खासमा भलिबल राष्ट्रिय खेल भएको धेरै भयो । यस खेलमा मध्यम तथा निम्न मध्यबर्र्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि हुनेकै जमात देखियो । सङ्घको नेतृत्व अभिजात बर्गले गरे । कोही सो बर्गको हुनु ठुलो कुरा भएन । तर, सत्य के हो भने उनीहरूको सम्पन्नता अभिभावक बन्नका लागि हो या शासन गर्नका लागि ? अबको अधिवेशनले यस कुराको छिनो फानो लगाउनै पर्छ ।
थाइल्यान्डमा नेपाली भलिबल टोली प्रशिक्षणका लागि गएको समयमा विवाद भएको थियो या थिएन ? बीजुलीबजार अधिवेशन पछि भलिबलको कङ्ग्रेसमा नेपाली प्रतिनिधित्वको बारे विवाद भएको थियो ? या थिएन ? यसमा कुनै बेइमानी भएको थियो यो थिएन ? यस्ता अनेकौँ प्रश्न छन्, जुन अबको अधिवेशनमा उठ्ने छन् । यी सबै प्रश्नको टुङ्गो लगाउनै पर्छ ।
भलिबल राष्ट्रिय खेल हो । त्यसो त भूगोलको नाममा भएको विभेद कुनै पनि खेलमा मान्य होइन । यदि राष्ट्रिय खेलमा त्यसो भएको छ भने त्यो त झन् गलत हो । भलिबलमा कसैले यस्तो महसुस गरेको छ की छैन ? खेलाडी, रेफ्रि या प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापककै हकमा । यो बहस गर्नका लागि पनि भलिबलकर्मीले लामो समय पाएका छन् ।
सकारात्मक पाटा पनि छन्, यस खेलमा । आर्थिक प्रशासनलाई दुरुस्त पार्ने काम र बैकीङ प्रणालीलाई कहिलेबाट सुरु भएको हो ? यसको हिसाब किताब पनि अबको अधिवेशनमा हुनै पर्छ । आफै सृजनात्मक काम गर्ने समूह र सञ्चार क्षेत्रसँगको सम्बन्धको फाइदाको उठाउँदै सङ्घको कार्यक्रममा आफ्नो मार्केटिङ गर्ने समूह बिचको फरक पनि यो अधिवेशनमा छुट्टिनु पर्छ । प्रमुख प्रशिक्षक परिवर्तनमा सङ्घको भूमिका छकी छैन ? छ भने कसैको पूर्वाग्रहको कारण हो की होइन भन्ने बहस पनि अव हुने नै छ ।
प्रशिक्षक, खेलाडी र रेफ्रिलाई दिइने अवसरमा कतै क्षेत्रीयताको गन्ध छकी छैन ? यदि कसैलाई त्यस्तो महसुस छ भने खुलम खुला बहस गर्ने समय पनि भएको छ । किनकि कुनै सङ्घमा जात, धर्म र भूगोलका सिमाना कुरा चल्दैनन् । आशा गरौँ, सोल्टी मोडको अधिवेशन पछिको यो दुई कार्यकाल सक्रिय अध्यक्ष र छायामा परेका अध्यक्ष बिचको फरक पनि हो । यदि पूर्व अध्यक्ष सक्रिय भएकै कारण कसैका लागि अप्ठेरो बनेको र पछिल्लो पटक सङ्घमा नभएको हो भने यसको हिसाब किताब पनि अब हुने की । केका लागि र कसका लागि पूर्व अध्यक्ष दान बहादुर तामाङ अप्ठेरो बनेका थिए ? वर्तमान अध्यक्ष शर्मालाई आफ्नो दुनो सोझ्याउन सफल हुने ठानेर कसैले बनाएको जाल मात्र हो की होइन ? यसको जवाफ पनि अबको अधिवेशनले खोजोस् ।